စွန့်လွှတ်စွန့်စား စပါယ်ယာမလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စွန့်လွှတ်စွန့်စား စပါယ်ယာမလေးများ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Oct 10, 2013 in Copy/Paste, Creative Writing | 63 comments
လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်က ဂေဇက်ရွာကြီးတခုလုံးကိုအုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ဖြစ်သွားစေတဲ့ သတင်းတခုဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲသတင်းလဲကြားရော ရွာသူ ရွာသားတွေကော၊ ရွာ့သတင်းထောက်တွေဖြစ်တဲ့ စီဂျေတွေရော လှုပ်လှုပ်ရွရွတွေဖြစ်လို့။ ရွာသူရွာသားတွေကလဲ သူ့ထက်ငါသတင်း အတိအကျသိချင်လို့၊ စီဂျေတွေကလဲ သူ့ထက်ငါ သတင်းရဖို့ ကင်မရာတွေ အသံဖမ်းစက်တွေတပြင်ပြင်နဲ့ပေါ့။ သတင်းကတော့ တော်တော်ကိုထူးဆန်းပါတယ်။ ဂေဇက်မြို့ကနေထွက်တဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောကြီး လမ်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလိုပြန်ပေးဆွဲခံရတာမှာ သင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့ သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေးက ၀န်ထမ်းနဲ့ခရီးသည် ၃၅၀ တို့ရဲ့အသက်ကို စွန့်စွန့်စားစားကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင်္ဘောပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်းဆိုတော့ ဖုန်းထဲကနေကြားရသလောက်ပဲဆိုတော့ ဖြစ်စဉ်ကိုအတိအကျမသိရတော့ ကုန်းပေါ် ကလူတွေကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတော့တာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်လဲ သင်္ဘောကြီး ဂေဇက်ရွာ ကိုပြန်လည်ဆိုက်ကပ်မဲ့နေ့မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်း အဖြစ်မှန်သိရဖို့ တရွာလုံး စိတ် ၀င်စားနေကြတာပေါ့။ ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ ပြန်ပေးသမားတွေကိုဘယ်လိုများ ဒီလိုအားနွဲ့တဲ့မိန်းကလေးက အံတုလိုက်ပါလိမ့်ပေါ့။ သင်္ဘောကြီးပြန်လာမဲ့မနက်အစောကြီး တရွာလုံး အစောကြီးထ နေရာရဖို့ ဆိပ်ကမ်းကို သူ့ထက်ငါဦးအောင်သွား၊ စီဂျေတွေကလဲ ကင်မရာတွေ အသံဖမ်းစက်တွေနဲ့ သင်္ဘောကြီးနဲ့အနီးဆုံးနေရာယူနဲ့ အရမ်းကို လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲအချိန်မှာပဲ သင်္ဘောကြီးက ဥသြဆွဲပြီး ဆိပ်ကမ်းကိုတရွေ့ရွေ့ဝင်လာပါတယ်။ လူတွေလဲလှုပ်လှုပ်ရွရွပေါ့။ သင်္ဘောကြီးဆိပ်ကမ်းကိုကပ်ပြီး တာနဲ့ တံတားကြီးကျလာတယ်။ အဲဒီမှာ ကင်မရာတွေစရိုက်ကုန်ပြီ။ လူတွေကလဲ အလံတွေလွှင့်၊ ပန်းကုံးတွေ တပြင်ပြင် လက်ခုတ်တွေတီးအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုနေကြပါ တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရှေ့ဆုံးကနေ ကယ်တင်ရှင် သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေးဦးဆောင်ပြီးဆင်းလာပါတယ်။ အိုးလူတွေကြိုလိုက်ကြတာ ချော်လဲဒူးပြဲ တက်နင်းအစုံပဲပေါ့။ သတင်း ထောက်တွေကလဲ သတင်းရရေးသူ့ထက်ငါပေါ့။ သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး ကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ။ အားလုံးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်လို့ဆင်းလာပါတယ်။ ကက်ပတိန်ဦးဆောင်တဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့ခရီးသည်တွေကတော့ မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာမို့ ဖက်ကြ ငိုကြဇာတ်စုံခင်းကြနဲ့ပေါ့။ ပွက်လောကိုရိုက်သွားတာပဲ။ အဲဒီမှာပဲ ရွာ့စီဂျေတွေထဲက ကံထူးရှင်တယောက်က သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး နဲ့အင်တာဗျူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းစွန့်စားခန်းကြီးကြား ရ တော့တာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းစုံကတော့ဒီလိုပါတဲ့
စီဂျေ။ ညလေး သင်္ဘောပေါ်ကပြန်ပေးဆွဲတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါလား
သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး။ သူတို့ကလေ ခရီးသည်တွေနဲ့အတူတူပါလာတာရှင့်။ လူ ၁၀ ယောက် ကြီးများတောင်။ လက်နက်တွေလဲပါသေးတယ်ရှင့်။ ဗုံးတွေလဲပါသေး တယ်။ ကြောက်စရာကြီးရှင့်။
စီဂျေ။ ဟုတ်လား။ အဲလိုကြောက်စရာကြီးတွေကို ညလေး ဘယ်လိုများကယ်တင်လိုက်ပါလိမ့်။
သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ သူတို့ သင်္ဘောပေါ်ရောက်ပြီးပြန်ပေးစဆွဲတော့ ညလေးလဲကြောက်တာပေါ့ရှင်။ ဒါပေမဲ့လဲကိုယ်က ခရီးသည်တွေကို ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲတော့ ခပ်တည်တည်နေရတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ခေါင်းဆောင်က ကျွန်မကိုပြောတယ်။ မင်းဒီည ငါတို့အခန်းထဲလာမယ်ဆိုရင် သင်္ဘောကြီးကော ခရီးသည်တွေပါ လွှတ်ပေးမယ်တဲ့။ ကျွန်မလဲနဲနဲတော့စဉ်းစားရတာပေါ့ရှင်။ နောက်တော့လဲမထူးပါဘူးဆိုပြီး သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ခရီးသည် တွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာပါရှင် တဲ့။
စီဂျေ။ အခန်းထဲမှာဘယ်လိုအပေးအယူများလုပ်ခဲ့ရပါသလဲ ညလေး။
သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး။ အင်းအဲဒါတော့နော် ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နော်။ အင်းအိုက်လိုပေ့ါရှင်။ ကယ်ခဲ့တယ်လို့ပဲမှတ်ပါလေတဲ့။
အဲဒါနဲ့ပဲ သတင်းယူခြင်းအမှု့ပြီးမြောက်သွားပါတော့တယ်။ နောက်တော့ အဲဒီ သင်္ဘောစပါယ်ယာမလေး က နာမည်အတော်ကြီးသွားပြီး ရုပ်ရှင်ကြော်ငြာလိုင်းထဲကူးသွား ပြီးအောင်မြင်သွားပါသတဲ့။
အဲအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး တပါတ်လောက်အကြာမှာတော့ ရွာမှာပဲရှိတဲ့လေကြောင်းလိုင်းကလေဗျန်စပါယ်ယာမလေးကလဲ အခုလိုပဲနာမည်ကြီးချင်ပါသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ခက်တာ က လေဗျန်ပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်လို့မှမရတာဆိုတော့ လက်မှိုင်ချနေရသပေါ့။ ဒါနဲ့ သူ့ချစ်ချစ် ဆြာဇောရိုးကိုပြောပြတယ်။ သဲလေး လဲအိုက်လိုနာမည်ကြီးချင် လိုက်တာ ကိုကိုတဲ့။ ဆြာဇောရိုးခမျာ အားပေးရအခက် တားရအခက်ဖြစ်နေရှာတယ်။ အိုက်လိုဖြစ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်လို့ အောင်မြင်သွားရင် စာချုပ်ဆိုတာမရှိတော့ပဲ နှစ် ကိုယ်တူနီးရမယ်။ ခွင့်မပြုပြန်ရင် စာချုပ်ကြီးကရှိနေလေတော့ နီးရင်နဲ့ဝေး နေရမယ်။ သူ့ခမျာလဲဆုံးဖြတ်ရခက်နေသပေါ့။ ဒါပေမဲ့လဲစိတ်တင်းလိုက်ပါတယ်။ အို လေဗျန်ပြန်ပေးသမားတွေရှိချင်မှရှိမှာပါလေလို့ပေါ့လေ။ ရင်တော့တမမပေါ့။
အဲလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ မနေ့ကတော့ ဆြာဇောရိုးတစ်ယောက် မျောက်မီးခဲကိုင်မိတော့တာပဲ။ သတင်းတခုရောက်လာတယ်။ လေဗျန်စပါယ်ယာမလေး ပါသွား တဲ့ လေဗျန်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားလို့ပါတဲ့။ ဆွဲသွားတာက နီဂရိုးငါးယောက်ပါတဲ့။ ဆြာဇောရိုးတစ်ယောက် ဘယ်လိုဆုတောင်းရရင်ကောင်းမလဲလို့ အပြင်းအထန်စဉ်းစားနေ ရပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးလွတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရမှာလား။ အန္တရာယ်မကင်းပါစေနဲ့ဆုတောင်း ရမှာလား။ လေဗျန်စပါယ်ယာမလေးချစ်သူဖြစ်ပြဇေ လို့ဆုတောင်းရမှာလား၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးယောင်္ကျားဖြစ်ပါစေဆုတောင်းရမလား။ အတွေးထဲမှာခြာခြာလည်နေပါတော့တယ်။
ကဲ အိုက်တော့ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်းတို့လဲ ဆြာဇောရိုးကိုယ်စားဘယ်လိုဆုတောင်းပေးရင်ကောင်းမလဲ။ ကူညီပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်
စာကြွင်း။ ကြားဖူးနားဝ ပုံပြင်တပုဒ်အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဖြတ်တောက်ထားပါသည်။
သြော် ..ရယ်…..အိပ်မက်တွေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ…..နာတော့ဆင်နင်းပဟ …အဟင့်ဟင့်ဟင့်
အလိုလေး …ကိုကြီးသဲရယ်…ကျေးဇူးကြီးပါ့ဗျာ …
ဇောရိုး နဲ့ နီဂရိုးဇာတ်လမ်း ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကွယ်
လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဟယ်ရီဆင်ဖို့ဒ် ( Air-Force One ) ပါလာရင်တော့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ၊ စပယ်ယာမလေး ကံကောင်းမှာပေါ့လေ ၊
ဦးဦးမျိုးရယ်….ခုတလောက ကံက အနိမ့်ပိုင်းရောက်နေတယ်…အဟင့် ..ဆင်စွယ်လက်မောင်းလေးတော့ ပစ်ရတော့မလားမသိ…အဟင့်
ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ အဲကူလဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါအုံး သူ့ခများဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ် ကိုမျိုးသန့်ရေ။
နိဂရိုး ၅​​ယောက်​စလုံး…A၆ ကြီး​တွေဖစ်​ပါ​ဇေလို့..ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ဒယ်​​နော့….:-P
(ဆာလံ ၂၅း၈) အကျွန်ုပ်သည်အသက်ငယ်ရွယ်စဉ် ပြစ်မှားမိသော အပြစ်တို့ကိုအောက်မေ့ တော်မမူနှင့်၊၊ ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ကရုဏာတော်ရှိသည် အတိုင်း အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့ တော်မူပါ ထာဝရဘုရား။ ….( ရှီးရေ…..နာ ညကအိပ်မက်မကောင်းလို့ အဲ့လာလေးဖတ်ပြီး ဆုတောင်းလာတာ …ရွာထဲဝင်တာနဲ့ ..နာ့ကိုသမထားတာ တန်းတွေ့တာပဲ ..အဟင့်ဟင့် )
ပါးပါးလေးဘာဆြာဆောရိုးရယ်။ Ending ကတော့ ကွကိုယ်ပေါ်ပဲမူတည်ဘာဒယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ အဲလောက်လေးဘာဘဲ
သင်​၏ ပါးတစ်​ဖက်​ကို ပုတ်​​သောသူအား ပါးတစ်​ဖက်​ကို​ပေးဦး​လော့..သင်​၏၀တ်​လုံကိုသိမ်းယူ​သောသူအား သင်​၏အကျီယူ​စေချင်​ငှါ​ပေးဦး​လော့…
အဲ့ဒါ နာတို့ လိုင်းမှာ ဟုတ်ဖူးနော်….
နာတို့က ခုမှ လေဗျန်တွေ ၀ယ်မို့ မှာတုန်းရှိသေးတာရယ်…
မွအိ လေဗျန်ဝယ်ရင် အိုက်လို စပါယ်ယာမလေးတွေရှာနော်။ အိုက်ဒါမှ ကိုယ်လေဗျန်စိတ်ချရမှာ
လေဗျံ စပယ်ယာမလေးက တာဝန်ကျေသူဆိုတော့ ခရီးသယ်တွေ အသက် ကယ်မှာပါလေ…
မကယ်ဘူးဟဲ့ …မကယ်ဘူး….ဖွဟဲ့…လွဲပါစေ..ဖယ်ပါစေ….ကယ်ပဲတော်…ဘယ်ကတဲက ကြည့်မရနေကြလဲ မသိ…အဟင့်ဟင့် …
ကယ်မှာပါ Wow ရေ။ သူက စီနီယာဆိုတော့ကား တာဝန်အရှိဆုံးမှုတ်လား
ပြန်ပေးလည်းမဆွဲ၊ ပြန်ပေးရင်လည်းမယူ၊ ပြန်လာရင်လည်း… ဆောဒီးပါ…
အပြုံးချိုချိုနောက်က ဓားသွားတွေကို ဆြာဇောရိုးမို့ သတ္တိကောင်းသကိုး…
ငယ်တုန်းကတော့ ကင်းမကြောက်ကျားမကြောက်ပေါ့။ အခုတော့ ကျောက်စ်က ကြောက်နေရဘီ
ဘီလို ဆုတောင်းရမဲဟင်။ ညှိနှုင်းရေး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းရမား ဟီး
နီကိုးတွေ ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်း ချပြီး….ကုန်တေပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး…အဟေးဟေး
နီကိုးတွေက အချင်းချင်း သိပ်ပြေလည်တာဆိုပဲ။ နှစ်ကိုယ့်တစိတ် ငါးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော် တွေလို့ကြားတယ်။ ဆြာ ဆုတောင်းမမှားဖို့ပဲလိုပါတယ်လေ
ခွီးးးးးး…. ဒီပို့စ်က ကော်မန့်တွေကို ဘူမှ မနီကျဘူးလား ကွ ဟင်…….အဟီးဟီး
သဘောကျနေဘာဒယ်ဒဲ့ကွယ်။ နီတွားလဲ များကဆုရအုံးမွှာ။ အနီဆုံးဆု အာဟိ ခွစ်ခွစ်
sure ကယ်မှာပါ, ကယ်မယ် လူ များ ရင် ကယ်မယ် ဇတ် သိမ်း လေး နဲ့ သိမ်း ပေး ပါ။။အား ပေး လျက် ပါ။
တီ နာ ရေ…
အလင်းဆက်နဲ့ချစ်သုဝေလေးတို့ ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက်လည်း..
ဟင့်အင်း…ရဘူး…နာ့လို အမှန်အကန်ဇတ်နာပြထားမှ ရတာ…အဟိဟိ
နေအုံးအေ နင့်သနပ်ခါးလေးအကြောင်းနဲနဲစနဲနာပြီးမှဇာတ်လမ်းရှာလိုက်မယ်အေ။ ဘယ်လိုအသီးကွဲ ဒလဲဆိုဒါလေးဂေါပေါ့
လေဗျံစပယ်ယာမလေးကို သူ့ချစ်သူက ဆရာကြီး ဒေ၀စက္ကမင်းမသိမ်ခ ရဲ့အတော်ဆုံးတပည့်
cabin ထဲ ၀င်လာတဲ့ နီဂရိုးကို Hey! Look at my eyes first. ဆိုပြီး အရင်စိတ်ညှို့ ပြီးတော့ Go and sit at your seat until my call. လို့ အမိန့်ပေးထားတယ်တဲ့။
အဲသလို တယောက်ပြီး တယောက် ထိန်းချုပ်ပြီး လေဗျံကြီးနဲ့ ခရီးသည်တွေကို ကယ်လိုက်လို့ နာမည်ကြီးသွားပြီး.
ဟုတ်လားအန်တီဒုံ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆြာဆောရိုးလေး စိတ်အေးတွားဘီပေါ့။ ဒိုင်နမိုလို ကားပေါ်လက်ထောက်တဲ့ပြကွက်ပြခိုင်းရမယ်။ ဂါဝန်တိုလေးဝတ်ပြီး
အဟိဟိ…စိတ်ညို့တတ်တာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ…တားတားတောင် သူကလေး ထိုင်ဆိုထိုင်..ထဆိုထ…အဟီး
အောင်မယ်လေးအေ ကြောက်ချဉ်ယောင် ဒုတ်တာယောင်ဆောင်နေဒါဘာအေ
ဆြာဆောရိုးကို နှယ်နှယ်ရရ မှတ်နေကြသလား။
သူက သူခိုးကြီး….. အဲ မဟုတ်ဘူး။
ငတက်ပြားလို ပေါင်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ရင် မိုးပေါ်ထပျံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းရှိတယ်။
သူ့ချစ်သူ လေဗျန်စပါယ်ယာမလေးဆီကို မိုးပျံပြီးရောက်သွားတယ်။
မိုးပေါ်က ကျလာတာကို အံ့သြပြီးကြည့်နေကြတဲ့ နီဂရိုး ၅ယောက်ကို လေကလေးနဲ့ မှုတ်လိုက်ရုံနဲ့ နီဂရိုး ၅ယောက်လုံး ပက်လက်လန်လဲကျသွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရွာထဲက စုံထောက်ကျော်ရာမညရဲ့ သတင်းပေးမှုကြောင့် ရဲကိုကိုတွေရောက်လာပြီး ပြန်ပေးသမားတွေကို အလွယ်တကူ ဖမ်းဆီးရမိသွားတယ်။
အထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ လေဗျန်စပါယ်ယာမလေး ကြည့်နေတယ်။
ဆြာဆောရိုးက အန္တရာယ်တွေ ကင်းသွားပြီဖြစ်လို့ လက်ဝါးနှစ်ဖက် ပွတ်ပြီး လေကလေးချွန်နေလိုက်တယ်။
အဲ…. အဲဒီလို အိမ်မက်ထဲမှာ လေချွန်တာ အပြင်မှာပါ အသံထွက်သွားပြီး မြွေတွေဝိုင်းလာတယ်။
ခုလောလောဆယ် ဆြာဆောရိုးကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါအုံ…………
မြွေကတော့မကြောက်သေး…ကချင်တွေက မြွေတွေ့ရင် ရိုက်သတ်ချက်စားပစ်တာ….အဟိဟိဟိ ..များကြီးတော့ မ၀ိုင်းခိုင်းနဲ့နော်…အန်တီမမ…နှစ်ကောင်လောက်ပဲ…အဟီး
ဆြာဆောရိုးကိုကယ်ဖို့ ပုလွေအော်ဒါမှာလိုက်အုံးမယ်။ မြွေက စပါးအုန်းချည်းပဲ ၅ ကောင်ဆိုတော့ မလွယ်ဘူးလေ။ ဟိုမယ်လဲ သူ့ဟာသူရှင်း အောက်မလဲ ဆြာဆောရိုးကွကိုယ်ရှင်းဇေ သတီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒီနေ့မနက်စောစော ၀င်ဖတ်သွားပါတယ် မသည်းနုအေးရေ…။
ဖတ်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် ဗျာ…။
အဟိ ဦးဘလက်ရေ ဟိုနေ့က ဆြာဆောရိုးနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်း အိုင်ဒီယာလေးရပြီး သူ့ကိုပြောပြီးတင်လိုက် တာပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ရီရအောင်လို့ပါ။
အဲဒီလေယာဉ်ပျံစပယ်ယာမလေးမှာ သူ့ချစ်သူဖိုးရုပ်ဆိုးဆောရိုးပေးထားတဲ့ သန်းကျော်တန်ရွှေနဲ့ သိန်းကျော်တန်တဲ့စိန်နဲ့ ကွင်းထားတဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်လေးဝတ်ထားသတဲ့.. သူလေးက အိုက်ဒီလူကြီးတွေကိုအမောပြေအအေးတိုက်ချင်လို့ပါဆိုပြီး သံပုရာသီးနဲ့သူ့လက်စွပ်ကိုစက်ထဲထည့်ဖျော်တိုက်သတဲ့.. အိုက်ဒါကို ဟိုဖိုးရုပ်ဆိုးသိသွားတော့ သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့လက်စွပ်ကိုမှအသုံးချရသလားဆိုပြီး တက်သွားလို့.. သူ့ကောင်မလေးက ပြန်နှာနှပ်ရသတဲ့
တော်သေး…အဟိဟိ ..ရွှေက သန်းကျော်တန်နေလို့…
သူ့ဖိုးရုပ်ဆိုးက အစစ်ပေးဒါဟုတ်လို့လားအေ။ ကြည့်လဲပြောအုံး မတော် သကြားခဲဖြစ်နေအုံးမယ်။ အဲဒါမွှ အိုက်ဒီနိဂရိုးငါးယောက် အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မယ်…မယ်….အစစ်ပေးတာဗျ..ဆောရိုးတို့က …ငွေရေးကြေးရေး…ကုလားခြေသလုံးမွှေး …အဟိဟိဟိ
အေးဘာအေးဘာ …ငွေရေးကြေးရေး…ကုလားခြေသလုံးမွှေး ဆိုလို့ အထပ်နှစ်ဆယ်မှာ ရှယ်လားစားမည်။
အဲဒငါးယောက်ထဲမှာ ကြောင်မဲဂျီးဒဂေါင် ပါတယ်ဒဲ့…. သူဂ ခရစ်စတယ်ဆိုဒဲ့ သာမီးလေး ဘဲလေ…
တကယ်က ငါးယောက် မဟုတ်ဘူး
နီဂရိုးက ဆယ်ယောက် ဗျ ဆယ်ယောက်
ဟို စပါယ်ယာမလေး ဘယ်လို ရှင်းလိုက်လဲတော့မသိ
လေယာဉ်ကတော့ အန္တရာယ်ကင်းကင်း ပြန် ဆင်းလာနိုင်သတဲ့
လူနာတင်ယာဉ်နဲ့ ခေါ်ထုတ်သွားရတယ် ဆိုလားး
ဟေ နောက်ငါးယောက်ငါတောင်မသိရပါလား။ ကျိရဒါ ဆြာဆောရိုးလုပ်ကြံလိုက်ပီထင်ဒယ်။
နတ်သမီး တစ်ဖက် တစ်ထောင်နဲ့ သိကြားမင်းပါ ငိငိ
မိတ်ဆက်ပေးမှာကိုတော့ ဖျက်ရဘူးလေ လူဇိုး
……လေယာဉ်ခရီးသည်တွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုကို အပြုံးချိုချိုဖြင့်ထမ်းဆောင်ပြီး သက်ပြင်းလေးတစ်ချက် ချကာ နားနေခန်းမှာ
နားဘို့သဲလေး ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည်..။ သူမတို့ အလုပ်က လေယာဉ်စီး ခရီးသည်တွေ အစစအရာရာ အစဉ်ပြေဘို့ တာဝန်ယူထားရသည်မို့ပင်ပန်းတယ်လို့ တော့ မထင်။ ပင်ပန်းတယ် ဆိုတာကလည်း ခဏဘဲလေ..။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် လေယာဉ်မယ်လေးများကို အပြုံးဖြင့်သာ မျက်ရိပ်ပြလိုက်သည်.. နားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သဘော..
ကိုယ်ကစီနီယာမဟုတ်လား.. .။ ကိုယ့်မှာ တာဝန်ရှိသည်. ခရီးသည်တွေက စရိုက်အမျိုးမျိုးဆိုပေမယ့် အရမ်းကြီး ဆိုးဝါးလှတယ် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်မရှိအောင် ငြိုငြင်မှု ရှိတဲ့ မျက်နှာ မပေါ်လွင်အောင် သတိထားရသည်..။
ကိုယ်က တာဝန်စိတ်နဲ့ စိုးရိမ်နေပေမယ့် အားလုံး အိုကေ ဆိုတာ ခြုံကြည့်ယုံနဲ့ သိသည်..။
လေယာဉ်ကလဲ အငြိမ်..အေးဆေး…။ ခရီးသည်တွေလည်းအေးဆေးမို့နားချိန်ဘဲဟုတွေးပြီး နားနေခန်းဘက်ကို သွားဘို့့တာစူလိုက်သည်..။
ရုတ်တရက် မျက်လုံးထောင့်မှာ ဖျတ်ကနည်း လူတစ်ချို့ထလိုက် သလိုဖြစ်လို့ လှည့်ကြည့်ခိုက်မှာပင် ကြမ်းတမ်းသော လက်ဖြင့် သူမရဲ့ ဆင်စွယ်ရောင် လက်ကောက်ဝတ်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး လိမ်ချိုးခံလိုက်ရပြီ..။
ဘာရယ်လို့ ကွဲကွဲပြားပြား မသိသေးပေမယ့် မသိစိတ်က သိလိုက်ပြီ… အကြမ်းဖက်မှု…
မျက်နှာချင်းဆိုင်အရပ်များဆီက လူတချို့ လျှင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားရင်း သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့အချင်းချင်း အချက်ပေးပြီး
သေနတ်လက်နက်ကိုယ်စီဖြင့် အားလုံးကို ပိပိရိရိ လှုပ်ရှားကြသည်..။
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက သဲလေးလက်ကို ချုပ်ကိုင်ထားရင်း နီဂဲသံဝဲသော US အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်
“ ကဲ..ခုချိန်က စပြီး ကျုပ်တို့ဒီလေယာဉ်ကို အပိုင်စီးလိုက်ပြီ”
လေယာဉ်ခရီးသည်အားလုံး ပဒူအုံတုတ်နဲ့ ထိုးသလို ဆူညံပွက်လောရိုက်ပြီး အော်သံ ငိုသံ တို့ ဖြင့် ဆူညံသွားသည်..
“ တိတ်စမ်းးးး ခင်ဗျားတို့ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေရင် သေမယ်.. ကျုပ်တို့ လိုအပ်တာအတွက်ဘဲ တောင်းဆိုမယ်..ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်
ငြိမ်ငြိမ်နေ… သေချင်ရင်တော့ လှုပ်လို့ ရတယ်..”
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူရဲ့ စကား အဆုံး သဲလေး လက်ကနည်း တချက်ပြုံးရင်း ကျိတ်ပြီး ၀မ်းသာမိသည်..
အခွင့်အရေး… ပြန်ပေးဆွဲရင်း ခရီးသည်တွေကို ကူညီဘို့အခန်းထဲဝင်ဘို့ ….
နီဂဲ ၅ယောက်… ဟော…ပထမ ၅ယောက်တွင်မက …. သူတို့ နီဂဲတွေ လှုပ်ရှားတာပိုင်မှန်းသိလို့နောက်ထပ် ၀င်ပါလာတာ ၅ယောက်…။
အိုးးးး ၁၀ ယောက်..
ဒီတစ်ခါမှ နာမည်မကြီးရင် သဲလေး ဒီတစ်သက် နာမည် မကြီးတော့….
ဒါ…ဒါ… သဲလေးပူဆာလိုက်လို့ များး ဟို သောက်ကောင်မ စီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့… ပြန်ပေးသမားတွေလား မသိ..။
သဲလေး အတွေးဖြင့် စိတ်က တစ်ချက် ပူလိုက်မိသည်…
တော်ကြာ သောက်ကောင်မ..မျက်နှာထောက်ပြီး ညှာနေရင်..သဲလေး ထင်သလောက် နာမည် မကြီးနိုင်…။
သဲလေး အရဲစွန့် ပြီး ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကို ကပ်မေးလိုက်သည်…
“ ပလိစ်…. ရှင်တို့ ကို သောက်ကောင်မားး လွှတ်လိုက်တာလား”
သဲလေးအမေးကြောင့် ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက နားမလည်သလို တစ်ချက်ကြည့်လာသည်..
ဟုတ်တယ်လေ… တခြားလေယာဉ်မယ်တွေဆို လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲ ပြီဆိုတာနဲ့သေမလောက်ကြောက်ရွံ့ နေတတ်ပေမယ့်
ဒီ ဆင်စွယ်ရောင်မလေးက ကြောက်ပုံမရဘဲ… ကျိတ်ပြီး ပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ပုံ..။
“ ဘယ်..သောက်ကောင်မားးးလဲ.. မသိဘူး…”
“ ဟို…ကချင် သေချင်းဇိမ်းလေ… ဒူးဝါးလေး”
“ တိတ်စမ်း… သောက်ကောင်မားးးးလဲ မသိဘူး… သောက်ဒူးဝါးမလည်း မသိဘူး… ငါ့နာမည် ဘာဘာ…
ဟားးးးးး သဲ ကျိတ်ဝမ်းသာမိပြီ…ဒါ သောက်ကောင်မားးးးအစီအစဉ်မဟုတ်ရင် သူတို့ ကိုယ့်ကို ညှာမှာ မဟုတ်..
လူက ၁၀ ယောက်..။ နီဂဲ ၁၀ ယောက်..။
“ ကဲ…အားလုံးငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ပါ… ကျုပ်တို့ဒီလေယာဉ်မယ်လေးနဲ့ ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်…သူ့ ဆီက ကျုပ်တို့တောင်းဆိုစရာ ရှိတယ်…..”
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက ပြောလက်စ စကားကို ရပ်ထားပြီး လေယာဉ်တစ်စီးလုံးကို ဝေ့ကြည့်လိုက်သည်..ပြီးမှ..
“ ကျုပ်တို့ တောင်းဆိုတာကို ဒီဆင်စွယ်မလေး လိုက်လျှောရင်.. ခင်ဗျားတို့အားလုံး မှဲ့ တစ်ပေါက် မစွန်းစေရဘူးးးး
အဲ…ပြောထားရဲ့ သားနဲ့လှုပ်လာရင် ကျုပ်တို့ အဆိုး မဆိုနဲ့ ..”
လေယာဉ်စီး ခရီးသည်တွေ အားလုံးတတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားသည်…သဘောက လေယာဉ်မယ်ကို ခေါ်ညှိပါ..သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ သဘော….။
သဲလေး ရင်တွေ ခုန်နေသည်… နည်းနည်းလေးဘဲ စိတ်ပူသည်…တစ်ယောက်ယောက်ကများ ရူးကြောင်မူးကြောင် လူစွမ်းကောင်း လုပ်ပြီး တားလိုက်မှာကိုပင်…။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်မှ မလှုပ်တာမြင်တော့…သဲလေး စိတ်အေးမိသည်..။
“ ကဲ…ဆင်စွယ်မလေး …မင်းတို့ ခရီးသည်တွေကို ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်.. ဟောဟို သီးသန့် ခန်း ထဲမှာ တို့ ၅ယောက်နဲ့ အရင် ညှိမယ်..ပြီးရင် နောက်၅ယောက်…လာ”
ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း…။ ကြမ်းကြစမ်းးးရမ်းကြစမ်းး နင်တို့ သောင်းကျန်းလေ ငါနာမည်ကြီးလေဘဲ…
စိတ်ထဲမှ တွေးရင်း အတင်းဆွဲစရာတောင်မလို အလိုက်သင့် ခပ်သွက်သွက်လေး ခေါ်ရာသို့ သဲလေး ပါသွားသည်..။
“ ချောက်…ကလောက် ကလစ်”
သဲလေးနဲ့ လူ ၅ယောက် အခန်းထဲ ၀င်ပြီးတာနဲ့ သူတို့ အဖွဲ့ ထဲက တစ်ယောက်က အခန်းကို လော့ချလိုက်ပြီ..။
“ ကျမရဲ့ခရီးသည်တွေ အတွက်…ကျမကို ရှင်တို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြုမူနိုင်ပါတယ်… အားမနာပါနဲ့ …”
ပါးစပ်ကပြောရင်း သဲလေး အကျီင်္ ရှေ့ က ကြယ်သီးလေးကို ဖျတ်ကနည်း ဖြုတ်လိုက်တဲ့ခဏ..
“အားးးးးး ” သဲလေးရဲ့ ဥအက်နေတဲ့ ပါးပြင်လေး ပူထွက်သွားသည်…
ကိုယ်ချွတ်တာ နှေးလို့ စိတ်တိုနေပြိထင်သည်..သဲလေး နောက်ကြယ်သီးတစ်လုံးကို ခပ်မြန်မြန်ဖြုတ်ဘို့ လက်ကို ပြင်လိုက်တဲ့
“ ဖြောင်းးးးး ”
“ ဟဲ့ …ဆင်စွယ်မလေး…အရူးကွက်တွေ လာနင်း မနေနဲ့ ”
“ ဒီမှာ…ငါတို့ က လေယာဉ်ကို ပြန်ပေးဆွဲ… ခရီးသည်တွေကို ခြိမ်းခြောက်… လေယာဉ်မယ်တွေကို စော်ကားတတ်တဲ့ …
ခပ်ညံ့ညံ့ ပြန်ပေးသမားတွေ မဟုတ်ဘူးးး”
“ ရှန် …”
“ မှတ်ထား မင်းတို့ လောက် စီနီယာ ပမွှားမလေးတွေ ကို တို့ က စိတ်မ၀င်စားဘူး ကလေးမရဲ့ ”
“ ဒါဆို…ရှင်…ရှင်တို့…ဟို..ဟိုဟာ မလုပ်ဘူးလား”
“ မင်းလို အငယ်တန်းတွေ စိတ်မ၀င်စားဘူး…တို့ က ခေါင် တွေကိုမှ ဖြိုချင်တာ… စားသုံးချင်တာ…”
“ ခေါင်တွေ… ဟို ဟို…ဂဇက်ရွာက ပန်းဂျီဆရာ ခေါင် ကို ပြောတာလားး…”
“ ထပ်…စ်စ်စ်… ဘယ်ကလာ ဒီလူက လိုင်းစုံ… ထိလို့ မရဘူးးး ကိုယ့်ပြန်တွယ်နေမှ…ဆေးမမှီဖြစ်နေမယ်..
တို့ ပြောတာ ခေါင်သူကြီး အခေါင် အချုပ်.. မင်းတို့ ထက်ကြီးတာကို ပြောတာ…”
“ ဟို…ဂျနီဖာ လိုပက်ဇ် လား”
“တော်တော် အ တဲ့ ခလေးမဘဲ… ဒါကြောင့်လဲ..နင်ပြောတဲ့ သောက်ဒူးဝါး လုပ်သမျှ နင်ခံရတာ ဆင်စွယ်မလေးရဲ့ ”
“ ကပ္ပတိန်…ကပ္ပတိန်.. မင်းတို့ ရဲ့ အခေါင်အချူပ်… ဘယ်သူလဲ…”
….. ဟ..ပြောလေ…ငါ ထပ်သမလိုက်လို့ …ဥအက်နေဦးမယ်… ပြော လေယာဉ်ကပ္ပတိန်က ဘယ်သူလဲ… အေးလေ မင်းနားလည်အောင် ပြောရရင်.. မင်းတို့ လိုအသားဖြူတွေ ဆင်စွယ်ရောင်တွေက USမှာ ရှာလို့ ရတယ်… မလိုချင်ဘူး..
တို့လိုချင်တာက… ကပ္ပတိန်….. ပြော ဘယ်သူလဲ…”
“…. ဟို..ဟို………………………………………မားခိုင်………….. ပါ”
“ ဘာ… မားခိုင် ဟတ်လား… အို ဘုရားသခင် နာမည်ကြားတာနဲ့ ငါသွေးတွေ ဆူလာပြီ ကလေးမရေ…
ကဲ…ကဲ…ဟောဒီက အတွင်းဖုန်းလေးနဲ့.. မင်းတို့ခေါင်းဆောင်.. မားခိုင်ကို ဖြစ်သမျှ ပြောပြပါ..ပြီးရင် ခေါ်လိုက်မယ်..သူမလာနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ မင်းတို့ သေတွင်းထဲကို…သေချာပေါက်ဘဲ….ကဲ…ရော့ ဆက်ပါ ဆက်ပါ…”
သဲလေး စိတ်ညစ်ညူးစွာဖြင့် ကပ္ပတိန်မားခိုင်ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ရသည်…
ပြီးတော့ သူတို့ တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စကို ပြောပြလိုက်ရသည်….
သဲလေး စကားဆုံးသည်နှင့် .. ကပ္ပတိန်ရဲ့ဝမ်းသာအားရနေသည့် လေသံကြီးနဲ့တက်ကြွနေတဲ့ အသံကို ကြားရသည်..
“ အိုကေ…ခရီးသည်တွေအတွက် ကိုယ် ပေးဆပ်မယ်..ကိုယ်ပေးဆပ်မယ်.. အဟီးးးးအဟီးးးဟီးးး
“ဒါဆို ခုလာမယ်..မင်းဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ဖြစ်သမျှ ကိုယ်ခံမယ်..ဟုတ်ပြီလား…”
တစ်ခဏ အတွင်းမှာပင် အပြင်မှ တံခါးခေါက်သံကြားရသည်…။
တစ်ယောက်က တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်တော့… မှိုရတဲ့ မျက်နှာနဲ့ကပ္ပတိန် ၀င်လာသည်…။
“ ကဲ…ဆင်စွယ်မလေးရေ.. ကျေးဇူးဘဲ.. မင်းထွက်လို့ ရပြီ.. ကြယ်သီးတွေ ပြန်တပ်လိုက်..သူများတွေ တစ်မျိုးထင်ပြီး မင်းကို အထင်သေးနေဦးမယ်…… ခရီးသည်တွေကိုလည်း ပြောပြပါ..စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ဟုတ်လား ….
ခဲလေသမျှ သဲရေကျပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ တံခါးဝဆီသို့သွားလိုက်သည်…
ပြီးတော့ မသွားခင် မလိုတမာစိတ်နဲ့ကပ္ပတိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့….
နာမည်ကြီးမှာ သေချာပေါက်သိထားသော မျက်နှာပေ.းးးး
မှိုရတဲ့ မျက်နှာပေး…..နဲ့…သဲလေးကို သနားတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေတာ တွေ့ ရသည်…
မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ဖနောင့်ကို ခပ်ဆောင့်ဆောင့်လျှောက်ရင်း တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်…
ပြီးမှ ဆံနွယ်စတွေ ဝေ့နေအောင် ဆွဲခါရင် ကပ္ပတိန်ကို လည်ပြန် မျက်စောင်းထိုးပြီး ရေရွတ်လိုက်သည်…
“ ဟွန့်သေဂျင်းစိမ်း….မားးးးခိုင်..ကြားထဲက အမြတ်ထွက်သွားတယ်”
ဇောရိုးအား သနားဂျင်း အားဖြင့်……….
ဆိုလို့ ရင်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ၊ အဘ ဖက် လှည့်လာမှာစိုးလို့ ။
တော်သေးတယ် ။ သူကြီး မား ခိုင် ဖက် လှည့်သွားပေလို့ ။
ကပ္ပလီ ဆယ်ယောက်တောင် ဆိုရင် ၊ လွယ်ဖူးရယ် ။ ဟီ ဟိ ။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပဲ
ကျွန်တော်တို့ ပြခန်းအတွက် ဘာမှလဲ ပေးရသေးဘူး
အာဟိ ရီလိုက်ရတာ ကိုယ်ရေးထားတာတောင်အဲလောက်မရီရဘူး။ သူဇာတ်သိမ်းပေးလိုက်မှပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့အေးရေ။ ကဲဆြာဆောရိုးရေ လေဗျန်စပါယ်ယာမလေးချစ်သူပဲဆက်လုပ် လိုက်ပါတော့။ မင်းတမီးယောင်္ကျားဖြစ်ချင်ရင်တော့ အင်းမားခိုင်ပဲနီးစပ်နေဒယ်ကွယ်
လက်စသပ်တော့ သဂျီးက ဒူးဝါးရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကိုး။
ဆောရိုးရေ၊ခေါင့်ကို တနေ့ ၃ခါ ရှိခိုးပေတော့.
(ရွာထဲမှာ ခေါင့်လို ဉာဏ်ရည်နဲ့ ရေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အနုပညာသမား ရှိတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်)
ဟုတ်ပါ့ အန်တီဒုန်ရေ။ တကယ်ရေးလဲရေးတတ်ပါပေ့။
ဆည်ပေါ်ရေကျော်… လှေကြီးပေါ် လှေငယ်တင်.. ဇာတ်ကြီးပေါ် ဇာတ်လေးထောင် တယ်လို့ 
ဟို ….ဒူးဝါးမ မျောက်မီးခဲကိုင်ဖြစ်နေတာကို သနားလို့ရေးလိုက်တာပါ…
မားးးးးးနု ရေးတာ ပိုကောင်းတာပါ..။
တွေ့ တဲ့ အခါ မုန့် ဝယ်ကျွေးမယ်ဗျ..။
ဟိုစောရိုးက ကပ်ပလီ အုပ်စာကို။
နီဂရိုးနဲ့ ကပ်ပလီ ဘာကွာတာကျလို့။
အကြီး အသေး ကွာတာ….။
အရပ် အမောင်း.. ပြောဒါ…။
ဒါ့ထက်ဇဂါးမစပ် ဒီပိုစ့်က ရွာရဲ့ Home မှာဘယ်မှာမှရှာမရဖြစ်နေတယ်။ အီးမေးထဲမှာတွေ့လို့ အဲကမှဖွင့်ရတယ်။ ဘယ်လိုပျောက်သွားသလဲမသိဘူးတော့